दुई दिनपछि लाग्ने सूर्य ग्रहणमा सूर्य र केतु अशुभ योग, यी राशि रहनुहोस् सावधान ! – List Khabar
Home / रोचक / दुई दिनपछि लाग्ने सूर्य ग्रहणमा सूर्य र केतु अशुभ योग, यी राशि रहनुहोस् सावधान !
दुई दिनपछि लाग्ने सूर्य ग्रहणमा सूर्य र केतु अशुभ योग, यी राशि रहनुहोस् सावधान !
admin December 2, 2021 रोचक Leaveacomment 226 Views
सन २०२१ को अन्तिम चन्द्र ग्रहण यहि डिसेम्बर ४ तारिखमा लाग्ने भएको छ । यस पटकको सूर्यग्रहणमा के होला ? यो सूर्यग्रहण किन विशेष छ? यो ग्रहणले राशिहरूलाई कसरी असर गर्छ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु अहिले महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी यस पोस्ट मार्फत आगामी सूर्यग्रहणको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ ।
आगामी डिसेम्बर ४ मा सूर्यग्रहण लाग्दैछ । नेपालमा समय अनुसार यो ग्रहण बिहान ११ बजेर १४ मिनेटमा सुरु हुनेछ । यो दिउँसो ०३:२२ मा समाप्त हुनेछ। यो ग्रहण वृश्चिक र ज्येष्ठ नक्षत्रमा हुनेछ जुन अन्टार्कटिका, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र नामिबिया जस्ता देशहरूमा देखिनेछ। यो ग्रहण भारतमा नहुने भएकाले यसको सुतक अवधि मान्य छैन ।
किन विशेष छ यो शुर्य ग्रहण
यस ग्रहणमा केतुसँग सूर्यको संयोग बन्ने छ । साथै, यस ग्रहणमा चन्द्रमा र बुधको संयोजन हुनेछ। सूर्य र केतुको प्रभावले दुर्घटनाको सम्भावना रहन्छ । एकै समयमा त्यहाँ राजनीतिक उथलपुथल हुन सक्छ। वृश्चिक राशि विषको राशि भएको हुँदा, रोग तथा स्वास्थ्यमा समस्या बढ्न सक्छ । यस बाहेक आकस्मिक दुर्घटना, विपत्ति जस्ता अवस्था आउन सक्छन् ।
गह्रणको समयमा राशिमा पर्ने असर
मेष राशि- मेष राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र दुर्घटना हुन सक्ने हुँदा सावधान रहनु पर्ने हुन्छ । वृष राशि- वृष राशिको मानिसले सय ग्रहणको समयमा आफ्नो व्यापार र दाम्पत्य जीवनमा ध्यान दिनुहोस्।
मिथुन राशी- यस ग्रहणले भने वृष राशिको लागि शुभ हुने भएको छ । मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको बाधा अवरोध हट्नेछ । कर्कट राशि- कर्कट राशि भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र मानसिक अवस्था बिग्रन सक्छ।
सिंह राशि- सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक चिन्ता र विवादमा पर्न सकिन्छ । कन्या राशि- कन्या राशिका लागि यस समयमा रोकिएका काम पुरा हुनेछन् ।
तुला राशि- तुला राशिका व्यक्तिहरूले पारिवारिक जीवन र दुर्घटनाको ख्याल गर्नुपर्छ। वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले हरेक काम र निर्णयमा सावधानी अपनाउनुपर्छ।
धनु राशि- धनु राशिका व्यक्तिहरूले दुर्घटना र असफलताबाट आफूलाई बचाउनु पर्नेछ। मकर राशि- मकर राशिको जीवनमा ठूलो र लाभदायक परिवर्तन हुनेछ।
कुम्भ राशि- कुम्भ राशिका व्यक्तिलाई यस समयमा काममा सफलता मिल्नेछ । मीन राशि- मीन राशि भएका मानिसले यस समयमा कुनैपनि निर्णय गर्दा र विवाहको विषयमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
Previous छोडेको १३ वर्षपछि निखिलले गरे जेठी श्रीमतीसँग डिभोर्स
Next नेपालमा अहिले दुई प्रणालीको असर, काठमाडौमा विहि’वारदेखि देखिनेछ यस्तो प्रभाव